James Swan oo Warbixin ka gudbinaya xaalada Soomaaliya - Awdinle Online
James Swan oo Warbixin ka gudbinaya xaalada Soomaaliya
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Jimco ah kulan ka leh Xaaladda Soomaaliya gaar ahaan dhinacyada Amniga, Doorashooyinka & is marin-waaga siyaasadeed ee hareeyay marxaladda looga gudbayo geedi socodka muddo xileedka dowladda waqtigeedu dhammaaday.
Sida ku xusan war kasoo baxay Golaha ammaanka Todobaadkaan, fadhiga waxaa warbixin guud laga dhageysanayaa Wakiilka xoghayaha guud Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan oo gunta uga jiray wada-xaajoodka Siyaasadeed & la socodka dhaq-dhaqaaqa ficilka loogu rogayo heshiiska 17-kii September 2020 laga gaaray Doorashooyinka balse ku dhaqaaqisteeda caqabadaha hareeyeen.
Swan ayaa kulamo siyaasadeed toos ugu horfadhiistay dhinacyada lafta-dhabarta u ah hirgelinta heshiiska Doorashooyinka, halka qaarkood uu kala hadlay muuqaalka Fogaan-Aragga (Video Conference) si loo dhammeeyo caqabadaha taagan.
Fadhiga Golaha ammaanka oo ku qabsoomaya Muuqaalka Fogaan-aragga waxaa dhankooda la dhageysnayaa danjirayaasha wakiilka ka ah 5-ta dal ee joogtada ah & 10-kale ee ku yimaada Doorashooyinka si xog-uruurintooda gaba-gabada kulanka loogu soo daro Warsaxaafadeedka ku xusan natiijada kulankaas.
Previous articleKeria Ibrahim: Hoggaamiye Sare oo ka tirsanayd TPLF oo la sii daayey
Next articleFarmaajo & Madaxweynayaashii hore oo ka qeyb galay Salaada Janaasadda Cali Mahdi+Sawirro